Kalluunka ee Zodiac-kii hore - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Kalluunku waa kooxda toddobaad ee Zodiac-ka, iyo unugga Zodiac-ka oo muujinaya natiijooyinka guusha Midka imanaya. Kalluunku wuxuu ka samaysan yahay sawirka laba kalluun oo ay isku xidhan yihiin xadhig dheer. horoscope-ka maanta haddii aad dhalatay inta u dhaxaysa February 20 iyo March 20 waxaad tahay Kalluun. In this horoscope casriga ah reading of zodiac qadiimiga, aad raacdo talada horoscope ee Pisces si aad u hesho jacayl, nasiib wacan, hantida, caafimaadka, iyo aragti shakhsiyaddaada.
Maxayse ula jeedeen dadkii hore?
Maxay Pisces tan iyo wakhtiyadii hore u sawirtay laba kalluun oo ku xiran koox dheer?
In Virgo Waxaan aragnay in Qur’aanka kariimka ah iyo Baybalkuba ay sheegayaan in Alle laftiisu uu sameeyay xiddigaha Burjika oo ah calaamado dib ugu laabanaya bilowgii aadanaha. Falaagadii hore ee xiddigaha cutub kastaa wuxuu u ahaa dadka oo dhan. Sidaa darteed xitaa haddii aad ‘ma’aha ‘Pisces’ ee dareenka horoscope casriga ah, sheekada qadiimiga ah ee xiddigaha Pisces ayaa mudan in la ogaado.
Kalluumeysiga xiddigaha ee Xiddigaha
Waa kuwan xiddigaha samaynta Kalluunka. Ma ku arki kartaa wax u eg laba kalluun oo ay koox dheer isku hayaan sawirkan?
Sawirka Xiddigaha ka kooban Kalluunka
Xataa isku xidhka xiddigaha ‘Pisces’ ee xadhkaha ma ka dhigayso kalluunka mid cad. Sidee bay xiddigiyayaashii hore u maleeyeen laba kalluun oo ka mid ah xiddigahan?
Kooxda Pisces oo leh xiddigo ku xiran khadadka
Laakiin calaamadani waxay dib u noqotaa inta aan ognahay taariikhda aadanaha. Halkan waxaa ah zodiac ee Macbadka Dendera ee Masar, in ka badan 2000 oo sano, oo leh sawirka labada kalluunka Pisces ee ku wareegsan casaan. Waxa kale oo aad ku arki kartaa sawirka dhinaca in kooxdu ay isku xidho.
Zodiac Masaarida qadiimiga ah ee Denderah oo leh Pisces ayaa ku wareegsan
Hoos waxaa ku yaal sawirka dhaqameed ee Pisces oo xiddiguhu isticmaalay ilaa hadda inta aan ognahay.
Sawirka Kalluunka Xiddigaha
Waa maxay macnaha labada kalluun?
Kooxdiina waxay ku xidheen labadoodii dabo?
Macnaha Asalka ah ee Kalluunka
Waxaan ku aragnay Capricorn in dabada kalluunka ay nolol ka heshay madaxa ariga oo dhimanaya. Aquarius wuxuu tusay biyo lagu shubay kalluunka – Kalluunka Austrinus. Kalluunku waxa uu u taagnaa dad badan oo heli doona biyaha nool. Tani waxaa la saadaaliyay dib u waqtiga Nabi Ibraahim NNKH markuu Alle u ballan qaaday
3 oo waan barakayn doonaa kuwa kuu duceeya, kan ku habaarana waan habaari doonaa: oo qabiilooyinka dhulka oo dhammu adigay kugu barakoobi doonaan.
Bilowgii 12: 3
Bilowgii 22: 18
Dadkan faraha badan ayaa lagu soo furtay Addoon Soo Socda oo loo qaybiyey laba qaybood
6 Oo isagu wuxuu leeyahay, Inaad addoonkaygii ahaatid, oo aad qabiilooyinka reer Yacquub soo kicisid, iyo inaad kuwii reer binu Israa’iil ka hadhay soo celisid waa wax fudud, oo weliba quruumahaan iftiin kaaga dhigi doonaa, si ay badbaadintaydu dhulka darafkiisa u gaadho.
Ishacyaah 49: 6
Halkan nebigu wuxuu kaga hadlay ‘qabaa’ilka Yacquub’ iyo sidoo kale ‘Quruumaha’. Kuwani waa labada kalluun ee Kalluunka. Isa al Masih PHUH markuu u yeedhay xertiisii ​​ayuu u sheegay
Matayos 4: 19
Kuwa ugu horreeya ee Isa al Masih waxay isticmaaleen calaamadda kalluunka si ay u muujiyaan inay isaga leeyihiin. Halkaan waxaa ah sawiro laga soo qaaday catacombs-yadii hore.
Astaanta kalluunka oo leh xarfo Giriig ah oo ku yaal xabaashii hore
Astaanta kalluunka ee qubuuraha Roomaanka qadiimiga ah
Laba kalluun oo dhagax lagu xardhay
Labada kalluun ee Pisces, qabiilooyinka Yacquub iyo kuwa quruumaha kale ee raacay Isa al Masih waxay leeyihiin nolol siman oo iyaga uu siiyey. Kooxdu waxay sidoo kale si siman ugu haysataa addoonsiga.
Kooxda – Gudbinta addoonsiga
Labada kalluun ee Pisces, in kasta oo la siiyay nolol ruuxi ah oo cusub, waxay isku xidhan yihiin kooxda Kooxda. Kooxdu waxay haysaa labada kalluunka. Laakiin waxaan aragnaa qoobka Aries the Ram oo soo socda dhanka kooxda. Waxay ka hadlaysaa maalinta kalluunka la sii dayn doono Aries.
Kalluunka leh Aries ee Zodiac. Qoobka Aries ayaa soo socda si uu u jebiyo Kooxda
Tani waa waayo-aragnimada dhammaan taageerayaasha Isa al Masih maanta. Injiilku waxa uu qeexayaa adoonsigeena hadda ee silica, qudhunka iyo dhimashada – laakiin annagoo rajo ka qabnaa maalinta xorriyadda addoonsigan (oo ay kooxdu ka wakiil tahay Pisces).
Xidhid & taaha hadda
18 Waxaan ku tirinayaa in waxyaalaha wakhtigan la joogo lagu xanuunsadaa ayan istaahilin in lala simo ammaanta iman doonta oo laynoo muujin doono. 19 Uunku wuxuu filasho aad u weyn ku sugaa muujinta carruurta Ilaah. 20 Uunkii waxaa la hoos geliyey wax aan waxtar lahayn, ikhtiyaarkiisna uma uu hoos gelin, laakiin waa kii hoos geliyey aawadiis, 21 taasoo la rajaynayo in uunka qudhiisana laga xorayn doono addoonnimada qudhunka ah oo la gelin doono xorriyadda ammaanta carruurta Ilaah. 22 Waayo, waxaynu og nahay in uunka oo dhammu wada taahayo oo wada foolanayo ilaa haatan. 23 Iyagoo keliya ma aha, laakiin innagana waa sidaas oo kale, kuweenna haysta midhihii ugu horreeyey ee Ruuxa, xataa innaga qudheennu dhexdeenna ayaynu ka taahnaa, innagoo sugayna carruurnoqoshadeenna, taasu waxaa weeyaan samatabbixinta jidhkeenna. 24 Waayo, waxaynu ku badbaadnay rajo, laakiin rajadii la arko rajo ma aha, maxaa yeelay, waa ayo kan rajeeyaa wuxuu arko? 25 Laakiin haddaynu rajayno wax aynaan arkin, de haddaba dulqaadasho ayaynu ku sugnaa.
Rooma 8: 18-25
Madax furashada ayaa imanaysa…
Waxaynu sugayna furashada jidhkeenna oo dhimashada laga soo furto. Sida ay u sii sharraxayso
50 Waxaan leeyahay, walaalayaalow, Jidhka iyo dhiiggu ma dhaxli karaan boqortooyada Ilaah. Qudhunkuna ma dhaxli karo qudhunla’aanta. 51 Eega, waxaan idiin sheegayaa wax qarsoon. Dhammaanteen ma wada dhiman doonno, laakiin dhammaanteen waa layna beddeli doonaa, 52 dhaqsiba, intaan il laysku qaban, markii buunka ugu dambeeya la yeedhiyo; waayo, buunku waa dhawaaqi doonaa oo kuwii dhintayna qudhunla’aan baa la sara kicin doonaa, waana layna beddeli doonaa. 53 Waayo, kan qudhmayaa waa inuu gashado qudhunla’aanta, oo kan dhimanayaana waa inuu gashado dhimashola’aanta. 54 Markii kan qudhmayaa uu gashado qudhunla’aanta, oo kan dhimanayaana uu gashado dhimashola’aanta, markaas hadalka qorani wuu noqon doonaa ee ah, Dhimashadii waxaa liqday libtii. 55 Dhimashoy, meeday libtaadii? Dhimashoy, meeday micidaadii? 56 Micida dhimashadu waa dembiga, oo xoogga dembiguna waa sharciga. 57 Laakiin Ilaah baa mahad leh kan libta inagu siiya Rabbigeenna Ciise Masiix.
1 Korintos 15: 50-57
Kooxda ku hareeraysan kalluunka ee Pisces waxay sawirtaa xaaladdeenna maanta. Laakiin waxaan sugeynaa si filo ah imaatinka Aries si ay noo xoreeyaan. Xoriyaddan addoonsiga dhimashada waxaa la siiyaa dhammaan. Burjigii asalka ahaa, Pisces kuma hagi go’aamadaada maalinlaha ah nasiib wanaag, jacayl iyo caafimaad wanaagsan, oo ku salaysan taariikhda dhalashadaada. Astaanteedu waxay cadaysay in aanay guusha Isa al Masih ina siin doonin oo keliya Biyaha noolaanshaha, laakiin sidoo kale in uu maalin uun naga sii daayo addoonsiga qudhunka, dhibaatada iyo dhimashada ee hadda inagu haysa.
Kalluunka Horoscope ee Qoraallada Xurmada leh
Maaddaama Horoscope-ku uu ka yimid Giriigga ‘Horo’ (saac) iyo qoraallada nebiyadu waxay calaamadeeyaan saacado muhim ah oo noo ah, waxaan xusnaa ‘saacadooda’ Kalluunka. Kalluunka nool ee biyaha ku jira, laakiin weli waxay ku xidhan yihiin xargaha ayaa calaamad u ah Kalluunka horo akhrin Nolol dhab ah laakiin sugaysa xorriyad buuxda.
2 Waxay idinka saari doonaan sunagogyada, weliba saacaddaa imanaysa in mid walboo idin dilaa uu u malaynayo inuu Ilaah u adeegayo. 3 Oo waxay waxyaalahaas u samayn doonaan, waayo, waxaanay garanayn Aabbaha iyo aniga toona. 4 Laakiin waxaan waxyaalahaas idiinkula hadlay in markii saacaddoodu timaado aad xusuusataan inaan idiin sheegay. Tan iyo bilowgii waxyaalahaas idinkulama hadlin, maxaa yeelay, waan idinla joogay
Yooxanaa 16: 2-4
11 Goortay idin hor keenayaan sunagogyada, iyo taliyayaasha, iyo kuwa amarka leh, ha ka welwelina sidii iyo wixii aad ku jawaabi doontaan ama waxaad odhan doontaan, 12 waayo, Ruuxa Quduuska ah ayaa saacaddaas idin bari doonaa wixii aad leedihiin inaad tidhaahdaan.
Luukos 12: 11-12
Waxaan ku noolnahay saacadda Aquarius iyo sidoo kale saacadda Pisces. Aquarius wuxuu keenay biyaha (Ruuxa Ilaah) inuu nolosha u keeno kalluunka. Laakiin waxaan ku jirnaa oo kaliya dhexda Sheekada Zodiac iyo finalka Sagittarius guushu wali waa mustaqbalka. Waxaan hadda wajahaynaa dhibaato, dhibaato, cadaadis iyo dhimasho jireed oo gudaha ah saacadan, siduu Isa al Masih NNKH nooga digay. Kooxaha haysta kalluunka waa dhab. Laakin xitaa sida naloogu hayo guutooyinkii weli nolol ayaan haysanaa. Ruuxa Quduuska ah ayaa ku nool, wax bara oo ina haga – xitaa marka la joogo wejiga dhimashada. Ku soo dhawoow saacada Pisces.
Akhriska Horoscope-kaaga Kalluunka ee Zodiac-kii hore
Adiga iyo anigu waxaan codsan karnaa akhrinta horoscope-ka Kalluunka maanta oo leh kuwan soo socda.
Horoscope Pisces wuxuu ku dhawaaqay inay tahay inaad soo marto dhibaatooyin badan si aad u soo gasho Boqortooyada. Runtii sifooyin caadi ah oo ka mid ah safarkaaga Boqortooyadaas waa dhibaato, dhibaatooyin, murugo iyo xitaa dhimasho. Ha u ogolaan in tani ay ku dejiso. Runtii waa faa’iido kuu leh maadaama ay kugu abuuri karaan saddex astaamood: iimaan, rajo iyo jacayl. Kooxaha Pisces ayaa tan kugu dhex samayn kara – haddii aanad qalbi jabin. In kastoo laga yaabo inaad dibadda luminayso, haddana gudahaad maalinba maalinta ka dambaysa dib kuu cusboonaysiinaysaan. Taas waa sababta oo ah waxaad idinku haysataan midhaha ugu horreeya oo Ruuxa. Sidaa darteed xitaa markaad gudaha ka cabato markaad si hammuun leh u sugto furashada jidhkaaga, ogow in dhibaatooyinkan dhabta ahi ay wanaaggaaga u shaqaynayaan haddii ay kaa dhigayaan mid la jaanqaadi karta Boqorka iyo Boqortooyadiisa.
Naftaada ku sii wad runtan: naxariistiisa weyni wuxuu boqorku kuugu dhalay rajo nool ka sarakicidda Isa al Masih kuwii dhintay, iyo dhaxal aan waligiis lumi karin, kharribin ama libdhi karin. Dhaxalkaas jannada baa laydinku hayaa, idinkoo xoogga Ilaah rumaysad ku dhawra ilaa imaatinka badbaadada oo wakhtiga ugu dambaysta diyaar u ah in la muujiyo. Waxyaalahan oo dhan aad baad ugu faraxdaan, in kastoo imminka wakhti yar aad ka calool xumaan doontaan jirrabado kasta. Kuwanu waxay u yimaadeen in rumaysadkiinna la caddeeyey, oo ka qiimihiisu dahabka badan yahay, kan baabba’a in kastoo dab lagu safeeyey – ay keenaan ammaan, ammaan iyo ciso markii Boqorka la muujiyo.
Ka sii qoto dheer ee Kalluunka & iyada oo loo marayo Sheekada Zodiac-kii hore
Bilawga sheekada Zodiac-kii hore waxay ku bilaabataa Virgo. Si aad u sii waddo Sheekadii Zodiac-kii hore eeg Aries.
Qoraalada dheeraadka ah ee u dhigma Pisces waa:
sarakicidda: Midhaha ugu horreeya ee nolosha cusub
Isa al Masih wuxuu ku dhawaaqay Jihaad – cadow kale
Isa al Masih ayaa kor u qaaday Laasaros
Fahamka & Qaadashada Hibada Neeftae
Tags:ancient meaning of LeoLeoLeo and hydraleo astrollogyLeo horoscopeLeo zodiac